Motor Better loo sameeyay fadhigii Motor of Shandong Fada Group Corporation, taas oo ahayd shirkad ay dawladdu leedahay a. Shandong Fada Group Corporation aasaasay 1976, taas oo ahayd horyaal ee taageere electronic iyo soo saaraha vacuum-nadiifiye ee Shiinaha.
In 1980, shirkadda soo bandhigay farsamooyin of qoyan iyo qalalan huufarka shirkadda ELECTROSTAR ka Germany, laga keeno khadadka wax soo saarka sare ee motor taxane ka USA, Japan iyo Switzerland. Waxa ay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee dalka China oo gaaray wax soo saarka mass of motor taxane.
Ka dib markii waxbarashada iyo ahmiyadda ka technology ugu sareeya iyo qalab muddo ka badan 10 sano, waxaa si guul leh horumariyo motor taxane for dhaqe kar halkii laga keeno mid ka mid ah 1999. Bishii Abriil 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd si guul ah ayaa loo diiwaan gashan taas oo ahayd gaar ah a ganacsi si wadajir ah-stock. In September 2005, shirkadda in Shandong Better Motor Co., Ltd. bedelay magaca